Yocingo: Imemezela ukuthi ifinyelele kubasebenzisi abayizigidi ezingama-400 | Kusuka kuLinux
Yocingo: Imemezela ukuthi ifinyelele kubasebenzisi abayizigidi ezingama-400
Ukufaka kwe-Linux Post | | Aplicaciones, Izaziso
Ezinsukwini ezimbili nje ezedlule, uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo yesiphambano shayela «Telegram», esetshenziswa ngokuya kakhulu emhlabeni, ngenxa yezici zayo ezinhle nemisebenzi, isimemezele ukuthi izofinyelela 400 izigidi zabasebenzisi.
Ngaphezu kwalokho, kule mpumelelo ubuye waphawula ukuthi, unabo abasebenzisi bakhe Izitika ezingama-20.000 2.0, imibuzo yemibuzo engu- 400 ne- € XNUMXK yabadali bezivivinyo zemfundo.
Noma kunjalo yocingo, uqobo akusilo uhlelo lokusebenza noma ipulatifomu ye- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile, okufanayo nokuba iphephe kakhudlwana, iyimfihlo futhi ineklayenti lamahhala, ivame ukusetshenziswa kakhulu ngabathandi noma abasebenzisi be- Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile, noma abantu abafuna okungaphezulu ubumfihlo nokuphepha ezindleleni zabo zokuxhumana. Njengabanye esivele sikhulume ngabo phambilini, njengezindlela zangempela zokukhetha WhatsApp.
Yocingo: Izindaba, imisebenzi kanye nezinzuzo kuze kufike kunguqulo yamanje
1 Yocingo: Abasebenzisi abayizigidi ezingama-400 nokuningi ...
1.1 Abasebenzisi abayizigidi ezingama-400
1.2 Imibuzo engcono
1.3 € 400K yabadali bemibuzo
1.4 Izitika ze-20.000
Yocingo: Abasebenzisi abayizigidi ezingama-400 nokuningi ...
Ngo-Ephreli, i Isiza esisemthethweni seTelegram uphawule ngeyakhe Own blog izindaba okukhulunywa ngazo, lapho sizophawula khona ngokukhishwa okufushane okumbalwa.
Abasebenzisi abayizigidi ezingama-400
"I-Telegram ifinyelele kubasebenzisi be-400.000.000 ngenyanga, isuka ezigidini ezingama-300 ngonyaka owedlule. Nsuku zonke okungenani abasebenzisi abayizigidi eziyi-1,5 babhalisela iTelegram. Izici ezinjengamafolda, isitoreji samafu, kanye nohlelo lokusebenza lwedeskithophu kwenza iTelegram ilungele ukusebenza kude nokufunda ngesikhathi sokuhlukaniswa. Akumangalisi ukuthi iTelegram iyinombolo 1 yezokuxhumana yezinhlelo zokusebenza zenhlalo phakathi kokulandwa kakhulu emazweni angaphezu kwama-20. Abantu emhlabeni wonke bashintshela kuTelegram ngejubane elisheshayo".
"Manje usungangeza izincazelo ezizovela njengoba abasebenzisi bephendula imibuzo yemibuzo, ukubasiza ukuthi bafunde emaphutheni abo noma ukubanikeza umongo owengeziwe. Izincazelo zenza imibuzo yemibuzo yeTelegram iphelele hhayi nje kuphela ekuhloleni ulwazi, kepha nasekuyisabalaliseni".
€ 400K yabadali bemibuzo
"Njengoba abafundi abayi-2 billion njengamanje bengekho ezikoleni zabo, umhlaba uswele kakhulu amathuluzi okufundisa online. Sifuna ukusiza ukuxazulula le nkinga ngokwakha i-database yezivivinyo zemfundo yazo zonke izifundo namazinga. Ukwenza lokhu, namuhla simemezela uhlelo lokusebenzisana oluvulekile lapho sizokwaba khona ama-EUR 400.000 kubadali bemibuzo yemibuzo yezemfundo".
"Ngenkathi iTelegram bekuyindawo okwenziwa kuyo izitikha selokhu zaqala ukubonakala, kuze kube namuhla ibingekho indlela elula yokubona izitika ezinhle kakhulu endaweni eyodwa. Ukuxazulula lokhu, sidale isiqondisi esisha sezitikha, lapho ungaphequlula futhi useshe phakathi kwezitikha zamahhala zeTelegram ezisezingeni eliphakeme ezingaphezu kuka-20.000 ezenziwe eminyakeni emihlanu edlule".
Imenyu yokunamathisela okusha ku-AndroidZonke izingxenye zemenyu yokunamathiselwe manje sezitholakala njengezendlalelo ezinwebekayo, okwenza imenyu ibe yinhle, ibe yinhle futhi isebenziseke kalula.
Ukuthuthuka kweMacOS: Manje sebengafinyelela kufayela le- i-multimedia eyabiwe ngqo kusuka kumakhasi wephrofayili ahlelwe kabusha.
Ukudubula okuqondiwe: Manje usungaphonsa imicibisholo e-animated
kunoma iyiphi ingxoxo ukubona ukuthi ngubani ohlasela kuqala.
Ngamafuphi, uma ungakathutheli ku- yocingo, kubalulekile ukuthi uhlele futhi ukwenze, ukuze uyeke ukusebenzisa izinhlelo ezingavikelekile nezokuphathelene, njengoku WhatsApp.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana ne uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo yesiphambano shayela «Telegram», esetshenziswa ngokuya kakhulu emhlabeni, ngenxa yezici zayo ezinhle nemisebenzi, nayo, eye yakwazi ukufeza impumelelo ye 400 izigidi zabasebenzisi; ube kakhulu inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Yocingo: Imemezela ukuthi ifinyelele kubasebenzisi abayizigidi ezingama-400
Inkinga ihlala ifana. Noma ngabe luhle kangakanani uhlelo lokusebenza, abantu abafuni ukushintsha ngenxa yomphumela wenethiwekhi. Ekugcineni zibaluleke njengenye indlela lapho eyokuqala yehluleka.
Sanibonani uManson! Ngiyabonga ngokuphawula kwakho okuyimpumelelo, kepha ngokwami ​​ngibonile ukuthi umbuthano wami osondelene womndeni, osebenzayo kanye nochwepheshe engibaziyo manje sebesebenzisa iTelegram neWhatsApp. Futhi njalo lapho ngibona abaningi bejoyina, ngakho-ke, akukhona kuphela uma kwenzeka yehluleka, isivele iba yimfashini, ngakho-ke ukwanda kwayo okuqhubekayo.
Iya uma ilusizo, konke okunika ukubonakala kwesoftware yamahhala (ezingeni lohlelo lokusebenza uma kunjalo, yize kamuva umbuzo wamaseva ubuzwa) ngoba uma ubonakala ngokwengeziwe, abantu abaningi ongabafinyelela. Ngakho-ke izindatshana ezinjengalezi zibalulekile, ngaphandle kokungabaza.
Sanibonani Arazal! Siyabonga ngokuphawula kwakho. Ngeke kungimangaze nakancane, uma ngokuhamba kwesikhathi, futhi njengoba iTelegram iqongelela abasebenzisi, iba uhlelo lokusebenza lwamahhala futhi oluvulekile ngokuphelele, luye ezingeni leseva, ngoba kuyinkambiso yezobuchwepheshe eveza izithelo eziningi zentengiso ezingeni lebhizinisi.
I-Dism ++: Isicelo somthombo ovulekile se-DISM GUI